अनमोलको ठाउँमा भित्रिए बलिउड अभिनेता अभिमन्यु, छिन्लान् त अनमोलको स्टारडम ? – Nepal Press
अनमोलको ठाउँमा भित्रिए बलिउड अभिनेता अभिमन्यु, छिन्लान् त अनमोलको स्टारडम ?
२०७९ वैशाख २९ गते १७:००
काठमाडाैं । दिवाकर भट्टराईद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘हनी बनी’ को छायांकन सुरु हुने भएको छ। नायकनायिका नै फाइनल हुन गाह्रो परेको यो चलचित्रमा अन्ततः मुख्य भूमिकामा बलिउडका मोडल तथा अभिनेता अभिमन्यु तोमर अनुबन्धित भएका छन् । अभिमन्यु भित्रिनुअघि उक्त चलचित्रमा अनमोल केसीले अभिनय गर्ने तयारी थियाे ।
चलचित्र ‘हनी बनी’ मा तोमरले नेपाली नायिका जसिता गुरुङसँग अनस्क्रिन रोमान्स गर्नेछन् । नायिकाकै कुरा गर्ने हो भने जसिता अगाडि नायिका सारा सिपाइलीले यो चलचित्र गर्ने कुरा थियो । तर, साराको लन्डनको भिसा नआएपछि निर्माण टिमले जसितालाई लन्डनमै अनुबन्धित गरेको थियो । चलचित्रमा नायक सलोन बस्नेतलाई पनि मुख्य भूमिकामा देख्न सकिनेछ । छायांकनको लागि सलोन पनि लण्डन पुगिसकेका छन् ।
चकलेटी अनुहार र आकर्षक व्यक्तित्व भएका तोमरले अनमोलको ठाउँ लिन सक्लान् त भन्ने धेरैमा कौतुहल छ । अभिमन्यु र जसिताको जोडी दर्शकले मन पराउलान् या नपराउलान् अथवा अनमोलको स्टारडम खोस्लान् या नखोस्लान्, त्यो त आउने दिनमा थाहा हुने नै छ।
को हुन् अभिमन्यु ?
दिल्लीमा जन्मिएका अभिमन्यु तोमरले सन् २००९ देखि ‘इमेज बजार’ को लागि फोटोसुट गरेर आफ्नो मोडलिङ करियर सुरु गरेका थिए । उनले थुप्रै चर्चित फेसन डिजाइनरहरूको लागि र्‍याम्प वाकसमेत गरिसकेका छन् । उनलाई ‘स्प्राइट’, ‘ग्याट्सबी’ र ‘सुजुकी एक्सेस १२५’ जस्ता ब्रान्डका टीभी विज्ञापनहरूले पनि फिचर गरिसकेका छन् ।
सन् २०१९ मा अभिमन्युले दिव्या खोस्ला कुमार र शिविन नारंगसँग ‘याद पिया कि आने लगी’ गीतको म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका थिए । उनको यो गीतले थोरै समयमै धेरै चर्चा बटुलेकाे थियो। गीत तुरुन्तै हिट भयो र रिलिजको केही दिनमा नै २० मिलियन भ्यूज पार गरेको थियो।
प्रकाशित: २०७९ वैशाख २९ गते १७:००
बिहे गर्न तयार भएकी राखीलाई प्रेमीको घरबाट अस्वीकार
नेपाली दर्शकलाई अर्को कमेडी ‘सो’, माग्ने बुढाको निर्देशनमा कमेडी हब
काठमाडौंका चार वडाको नतिजा आउन बाँकी, बालेनको अग्रता अनुपात उस्तै
काठमाडौं- १९ को वडाध्यक्षमा दोब्बर मतसहित कांग्रेसका श्रेष्ठ निर्वाचित